Ngaba unganditsho indlela yokwakha i-backlink ngo-2016 ngeWebhu 2. 0 ukudibanisa izenzo?
Ngaphambi kokuba nantoni na enye, makhe sijamelane nayo - IWebhu ye-2. 0 ukuqhagamshelana nezenzo kusebenza! Ngoko, ukuba ufuna ukufumana indlela yokwakha i-backlink ngo-2016, ukuthatha inzuzo ngokufanelekileyo kwiWebhu ye-2. 0 ukuqhagamshelana nezenzo, makhe sijonge ngesikhokelo esincinane apha ngasentla. Injongo yethu kukunyusa izinga lewebhusayithi okanye iblogi ye-website yakho-ngaphandle kokulimaza amava omsebenzisi abaphambili. Kwaye, ke, ufuna ukuba yonke into ekhuselekileyo ukukhusela ukukhankanywa kokusebenzisa nayiphi na amacebo okanye amacebo angavumelekanga. Ngaloo ndlela, unako ukuhamba ngokuphula izikhokelo eziphambili ze-webmaster kwaye ngoko uzakufumana isohlwayo esinzima. Yingakho ndiza kukubonisa indlela yokwakha i-backlink ngo-2016 indlela engcono kunye nekhuselekile kunokwenzeka, kungekhona ukuba uchithe ngeGoogle.
Hlala ukhumbule, nangona kunjalo, ukuba uzuze kwisakhiwo seWebhu 2. 0 backlinks kufuneka usebenze ngaphakathi kwesicwangciso se-SEO esilungeleleneyo. Kwaye kuya kufuna ukuba utyhale ixesha elide kunye nomgudu wokudala i-link kuphela esebenzayo ezinokubanika ixabiso langempela kwiindwendwe zekhasi lakho. Ngaphandle koko, iwebhusayithi yakho iya kuphakamisa ifulegi ebomvu ngeGoogle, kwaye ihlala iphela ngesigwebo se-ranking - kungekudala okanye kamva. Yingakho kufuneka uhlale ucacile kwezo zindawo ezininzi ezithembisa iiphakheji ezahlukahlukeneyo ezithengiswa ngobuninzi, okanye nakwiiseti ezinkulu ze-backlinks ze-HQ ezihlawulwayo - neentetho zabo zenkanuko zibiza zonke i-backlinks zabo zivela kwi-website ye-PR kunye ne-PR.
Nguye kuphela ilizwi lam elilungileyo lokuba ungalithatha ngokukhawuleza - ukukhawuleza kwintsebenzo ngokukhawuleza kuthetha ukuba awuyikuchitha nje imali eyimali enzima, kodwa yenza yonke into ibe yinto engalindelekanga kwaye inokuyenza ingozi ngakumbi ku lungile. Ngoko, masibuyele kwinqanaba - ukudala iiWebhu 2. 0 izixhumanisi ezikwazi ukunikela ngokugqibeleleyo kweziphumo eziphezulu ezenzayo kwi-SEO. Ngezantsi luza uluhlu lweengongoma eziphambili zokuba uqonde indlela yokwakha i-backlink ngo-2016-indlela efanelekileyo.
Misela ukufumaneka kwi-inthanethi
Misa isiseko esilungileyo sokuhlala kwentsapho kunye nehlala njalo kwixesha lakho lewebhu okanye iblogi. Isinyathelo sakho sokuqala apha kukugqiba zakho iinkcukacha kwiWebhu enkulu 2. 0 izisayithi ezentlalo ezichaphazelekayo kwi-niche yakho okanye ingxoxo yesifundo jikelele. Ngoko ke, ndiza kubona indlela yokwakha i-backlinks ngo-2016 ukususela ekuqaleni - makhe siqale ngokuzalisa iiprofayile zakho kwiindawo ezilandelayo zoluntu:
gcwalisa iphepha lakho lomntu kwi-Google Bhizinisi Lwam;
yakha iphepha lakho kwiYelp;
uzalise ii-akhawunti zentlalo kwi-Twitter, Facebook, LinkedIn;
uqhubeke nokugcwalisa isiqinisekiso se-Alexa page;
tyelela iColombia (kufuneka wenze ntoni xa ujongene neB2B, okanye ishishini lakho linomxholo wezitena kunye nomdaka).
Ukuchonga igama leBrama
Xa zonke ii-akhawunti zezenhlalakahle kunye namaphepha ephrofayili ekhona, lixesha lokubandakanya izixhumanisi ukuya kwindawo yakho eyintloko ngamnye. Ukwenza njalo, ungalibali ukuseka iikhonkco zakho ezisandul 'ukwenziwa kwisicatshulwa segama elingundoqo. Inqaku: ukuba neblog blog okanye iimpapasho ezixhaswe kakuhle kunye neemibuzo neempendulo (njengeQuora). Oko kusebenza njengesihogo!
Yakha amakhasi e-Community
Ekugqibeleni, konke okufuneka ukwenze kukuzikhusela ngokupheleleyo kwihlabathi le-SEO, kwaye usebenze kakuhle kumxholo wekhwalithi ohambisa ixabiso kubasebenzisi. Ukwenza yonke into ibonakale yendalo, ufanele ugxininise oku kulandelayo:
ukuthumela umxholo othabisayo ukuba udibene kunye;
isakhiwo esingekho ngaphezu kweetlanu sidibanisa ngeveki;
ukupapasha izithuba zokukhuthazwa kwiibhulogi ze-Tumblr, iphepha lokushicilela kwi-Facebook, ii-blogs ze-WordPress, ii-akhawunti kwi-Instagram, kunye nevidiyo kwi-YouTube Source .